पाल्पाका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव - samayapost.com
समयपोष्ट २०७६ पुष २९ गते १४:३९
पाल्पाका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव भएको छ । जिल्लाका आधारभूत विद्यालयमा २६८ शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ९–१०) मा २४९ र (कक्षा ११–१२) मा ६१ शिक्षकको अभाव छ ।
सेमेष्टर भदौ तेस्रो र वार्षिक असोज पहिलो हप्तादेखि परीक्षा !
कोरोनाको जोखिम बढ्दो छ विद्यालय नखुलाउ
तपाईको बच्चा जिद्दी स्वभावको छ ? अव यी टिप्स अपनाएर सुधार्नुस्
विद्यालयहरुले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दबाब दिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी